डिभोर्सपछि पश्चाताप गर्दै सामन्था, श्रीमानको नाममा यस्तो ट्याटु ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/डिभोर्सपछि पश्चाताप गर्दै सामन्था, श्रीमानको नाममा यस्तो ट्याटु !
तेलुगु फिल्म इन्डस्ट्रीकी चर्चित अभिनेत्री सामन्था रुथ प्रभु आजकल आफ्नो आगामी प्रोजेक्टमा निकै व्यस्त छिन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय छिन् । सामाजिक सञ्जालमा उनलाई ठूलो संख्यामा फ्यानले फलो गर्ने गरेका छन् । आफ्ना फ्यानहरूसँग आफ्ना प्रोजेक्टहरू बारे जानकारी बाँड्नुका साथै आफ्ना सुन्दर फोटो-भिडियोहरू सेयर गरिरहेकी छिन् ।
हालै, सामन्था रुथले इन्स्टाग्राममा आफ्ना फ्यानहरूका लागि आस्क मी एनिथिङ शर्त राखिन्, जसमा फ्यानहरूले उनलाई धेरै प्रश्नहरू सोधे। यस क्रममा उनका केही फ्यानले उनलाई उनको ट्याटुसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि गरेका थिए ।
एक फ्यानले सामन्थालाई सोधे– कुनै ट्याटु आइडिया तपाईंले प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ दिँदै सामन्थाले भिडियो सेयर गर्दै भनिन्– ‘के तपाईलाई थाहा छ यदि मैले युवावस्थामा आफूलाई सल्लाह दिनु परेको भए म शरीरमा कहिल्यै पनि ट्याटु नखोप्न भनेर भन्ने थिएँ । सामन्था रुथको शरीरमा तीनवटा ट्याटू छन्
नागासँग ब्रेकअप भएपछि सामन्थाले यो ट्याटु पाउँदा पछुताउँछिन्। समन्था र नागाले सन् २०१७ मा गोवामा धूमधामका साथ विवाह गरेका थिए तर गत वर्ष विवाह गरेको चार वर्षपछि दुवैको ब्रेकअप भयो र एकअर्कासँग सम्बन्धविच्छेद भयो ।
‘ब्लाइन्ड डेट’ को निर्माण टिमले दर्शकलाई यसरी उल्लु बनायो